Afeef Macluumaadka Caafimaadka| Dragons Head Shop
Bogga ugu weyn → Afeef Macluumaadka Caafimaadka
Digniin: Badeecadaha ay iibiyeen ama soo mariyeen mareegaha Dragons Head Shop Ltd (https://www.dragonsheadshop.co.uk) sida ku cad qoraalkayaga shuruudaha iyo xaaladaha waxaa iibin kara ama arki kara oo kaliya dadka waaweyn ee mas'uulka ka ah ee jira 18 ama ka weyn tan waxaa ka mid ah alaabada uumiga iyo qaybaha dareeraha elektaroonigga ah.
Dragons Head Shop Ltd mas'uul kama aha saamaynta badeecooyin kasta oo lagu iibiyo mareegahayada.
Macluumaad kasta oo la bixiyo ama aragti kasta oo la muujiyey oo la xiriirta uumiga iyo alaabada uumiga looguma talagalin fikrad khabiir ama talo caafimaad oo aan ka sheeganayn waxtarka caafimaadka ee adeegsiga uumiga ama uumiga. Waa inaad talo caafimaad ka raadsataa xirfadle caafimaad haddii aad ka welwelsan tahay adeegsiga alaab kasta oo uumi -baxa.
Xidhiidhada soo socda ayaa laga yaabaa inay ku siiyaan macluumaad dheeraad ah si ay kuu oggolaadaan inaad samayso doorasho xog -ogaal ah oo ku saabsan waxtarka caafimaadka iyo in kale.
NHS Qiiq la'aanta
Caafimaadka dadweynaha ee England
Waxaad sidoo kale soo dejisan kartaa booska uu qaatay CRUK iyo RCGP ku saabsan sigaarka elektarooniga ah.
Nikotiinta waxay ku jirtaa dareerayaal badan oo elektaroonik ah iyo alaab uumi-bax; sidaas darteed sharci ahaan looma iibin karo qof ka yar 18 sano. Nikotiinta waa walax aad u qabatimaysa waxayna noqon kartaa sun. Dragons Head Shop Ltd oo ku iibineysa mareegaheenna wixii qalab uumi-bax ah, sigaarka elektiroonigga ah ama dareeraha elektaroonigga ah sinaba uguma doodo mana dhiirrigeliyo adeegsiga alaabtan.
Dheecaannada elektaroonigga ah ee laga iibiyey mareegahayaga waxay leeyihiin koofiyado aan carruurtu caddayn waxayna u baahan yihiin in laga fogeeyo meel carruurtu gaarto. Haddii aadan hubin uumiga, fadlan la tasho dhakhtarkaaga. Haddii aad cabto wax e-dareere ah, raadi daryeel caafimaad oo degdeg ah sababtuna tahay halista caafimaad ee ka iman karta maaddooyinka ku jira.
Dragons Head Shop Ltd mas'uul kama noqon karto ama mas'uul kama aha adeegsiga khaldan ama si xun u isticmaalka mid ka mid ah badeecadaha ay iibiyeen ama mareegaheenna. Kahor intaadan isticmaalin wax kasta oo uumiga uumiga ah, waa inaad akhridaa buugga tilmaamaha soo -saareyaasha ka hor intaadan isticmaalin oo aad raacdo tilmaamaha loogu talagalay dejinta iyo adeegsiga qalabkaaga. ﻿
Ujeedada loogu talagalay Cannabidiol (CBD) waa in loo isticmaalo sidii kaabis dabiici ah. CBD waa inaysan ku beddelin daawo rasmi ahaan loogu qoray xirfadle caafimaad. Badeecadaha CBD ee lagu iibiyo mareegahayaga looma jeedin ogaanshaha, daaweynta, daaweynta ama ka -hortagga cudur kasta. Had iyo jeer la tasho xirfadlahaaga daryeelka caafimaadka ka hor intaadan qaadin wax alaab CBD ah haddii ay dhacdo waxyeellooyin ama dhibaatooyin iman kara, ka hor intaadan isticmaalin badeecad kasta ama aadan u diyaarin qorshe daaweyn cudur kasta ama xaalad kasta.